China China Kukosha uye Export Fair (Canton Fair) Official Exhibitor Mutengi Webhusaiti fekitori nevatsigiri | Huaihai Holding Boka
China Import uye Export Fair (Canton Fair) Official Exhibitor Mutengi Webhusaiti
Kambani yedu, Huaihai Holding Boka anogadzira anogadzira mukati mini mota indasitiri, Kwemakore makumi mana nematatu apfuura isu tiri kuchengeta kupa mhinduro dzekufamba kune vanhu vakasiyana mazera, makirasi uye nyika. Uye kubva pakare kare, isu tiri hanya nezve maitiro ekuita vakweguru kutyaira zvakanyanya uye zvakanaka. Uye ndiyo nyaya yedu nhasi.
Mazuva ano huwandu hwevakweguru hwave dambudziko guru pasi rese. Zvinoenderana nekuferefetwa kubva pawebhusaiti, panosvika gore ra 2018, huwandu hwevanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemasere emadhora mazana masere negumi muzana. Uye zvinotarisirwa kuti panosvika gore ra2050, nhamba iyi ichawedzera kusvika pa17%. MuEurope uyeNorth America, pachave nevanopfuura makumi maviri neshanu muzana ehuwandu hwevanhu vanopfuura makore makumi matanhatu, zvinoreva pane ese mana vanhu vaunogona kusangana "munhu mukuru".ListCanton Fair pamhepo
Huwandu hwevanhu vari kuchembera hwachinja hupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hwakaunza akawanda matambudziko akanangana Munyika dzakawanda, Kudhira License kuchamiswa kune vanhu anopfuura makore makumi matanhatu nemashanu kana vasina kudarika bvunzo dzegore. Zvakare zvine njodzi kune vechikuru kutyaira mudhudhudhudhudhu kana Magetsi mudhudhudhu mumugwagwa, uye nezvekufambisa neveruzhinji nguva yakawanda haina kukwana zvachose. Saka iko musoro kuti vanhu vekare vabude. Pahwaro uhwu, tinoda tariro yekupa mhinduro dzangu. Isu tinopa zano vakweguru kutyaira emagetsi matatu matatu ekugadzirisa matambudziko avo ekufamba. Padivi pangu ndeimwe yemafomu edu anooneka, tinogona kuva nekutarisa.Canton Fair Mutengi
Sei tricycle yemagetsiyakakodzera vakwegura here? Ini ndinofunga kune angangoita 3 makuru zvikonzero. Kutanga,tricycle yakachengeteka. Muchimiro chakagadzikana zvakanyanya kupfuura mavhiri maviri, uye isu tinomisa iyo max kumhanya ku25 km / h, iyo isiri yekumhanyisa zvachose asi yakanaka kune vanhu vekare. Chechipiri, tricycle inonyanya kugadzikana kana uchityaira. Isu tinoshandisa yepamusoro yemhando chigaro cushion chemutyairi chigaro uye chinotasva chigaro. Hazvisi nyore kunzwa wakaneta kunyange kutyaira kwemaawa. Yetatu, iyi tricycle ine mashoma size, yakareba 8 tsoka, 3.4 tsoka pakubata. Iwe uchaifarira kana uchityaira mumugwagwa wakashata.Online Canton Fair
Sezvatinoziva, mota ndiyo musimboti we mota. Izvitricycle yakaiswa 60V1000W mota, isu tinoshandisa yekutanga mutsetse, ine iyo yekuita yakakura kutanga torque, nekukurumidza kusimba kupindura, kusimba kwakawandisa kuwanda, ruzha ruzha, kusheedzera kushanda, hupenyu hwakareba hwehupenyu. Simba rayo repamusoro rinosvika 2200W, ichipa iyo max kumhanya 30km / h, iyo yakaringana kuti vakuru vatyaire.
Chechipiri chakakosha chikamu ndiye mutongi, mutongi wedu ane hutongi hwekushandurwa kwakanyanya, hapana kutanga kweJitter, simba rakawanda rekuremerwa, kudzivirira kwakaderera. Iyo ine yega-yekutarisa basa: yakasimba yekuzvitarisisa-uye yakasimba yekuzvitarisisa. Chero bedzi iyo controller iri musimba remagetsi, inozozviona yega mamiriro mamiriro ane hukama hwayo, sekutendeuka mubato, bhureki muchibvumirano kana imwe switch yekunze, etc. Kana ikatadza, murongi anozongoerekana agadzira kuchengetedzwa kuti azovimbisa zvizere kuchengetedzwa kwekutasva.
Yechitatu imwe inosara kumashure, tinosarudza yenyika mhando yekupa system yeiyo main minimer, uye yekudziya-yepamusoro kudzima maitiro anoshandiswa kune hafu shaft. Iyo P5 giredhi fani inova nechokwadi chekusimba kwemaitiro ekutakurisa system isu takazviita isu pachedu, axle tube:φ56mm, ukobvu huri 3.5mm.Canton Fair Mutengi
Nguva yekutumira: Jun-22-2020